रमेश ज्ञवाली बुधबार, वैशाख ३, २०७७, १२:११
हामी आफ्नो बाहेक अरुको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा निकै चनाखो हुन्छौं। कुन बेला कसले के गर्नुपर्छ भन्ने लम्बेतान भाषण पनि दिन सक्छौं। अरु त के अब हामी नेपाली यही कोभिड-१९ को विषयमा चौबाटोमा उभिएरै केहीबेर भाषण गर्न सक्ने भइसक्यौं। कुनै गम्भीर अध्ययन र तथ्यांकको आधारमा होइन कि सामाजिक सञ्जालमा भेटिएका सामग्रीलाई पत्याएर र त्यसमा २/४ ओटा आफ्नै मौलिक हावादारी गफ मिसाएर।
सरकारले, मिडियाले वा अरु क-कसले के गरेन र गर्नुपर्थ्यो भन्ने विषयमा त हामीले लामै सूची त दिन सक्छौं। तर, एक जिम्मेवार नागरिकको हैसियतमा यो लडाइँमा आफ्नो योगदान के रह्यो त? आफैंलाई सोध्नुपर्ने भएको छ।
राज्यको नागरिकको हैसियतमा पहिलो कर्तव्य भनेको राज्यले संकटको बेला लागू गरेका नीति नियमको पालना गर्नु हो। अहिले सरकारले आम मानिसलाई घरमै बस्न भनेको छ। सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय र यातायात ठप्प नै छ। सरकारले अत्यावश्यक सेवामा समस्या नहोस् भनेर कतिपय निकायमा काम गर्नेहरुलाई पासको व्यवस्था गरी आवतजावतको बन्दोबस्त गरेको छ। तर कतिपयले भने रमिता हेर्नका लागि सो सुविधाको दुरुपयोग गरेको पाइन्छ। खाद्यान्न वा औषधि ढुवानी गर्नेहरुले ती सामग्रीका अतिरिक्त मानिसहरुसँग चर्को मूल्य लिएर यात्रा गराएको पाइन्छ।
यसबाट दुवै पक्षलाई क्षणिक लाभ भए पनि संक्रमणको जोखिम रहन्छ। ती व्यक्ति स्वयं र समाजलाई पनि नोक्सान भइरहेको र हुनसक्ने देखिन्छ। यतातर्फ उनीहरुले ध्यान दिएको पाइँदैन।
सरकारले विदेशबाट आउनेहरुलाई स्वास्थ्य जाँच गर्न र एकान्तबासमा बस्न भने पनि कतिपयले अटेर गरेर स्वास्थ्य जाँच नगरेको, निष्फिक्री हिँडेको र कतिपय त क्वारेन्टाइनबाट भागेको समेत सुनिन्छ। जसले गर्दा सिंगो समुदायमा संक्रमणको जोखिम बढेको छ।
धेरैले लकडाउनलाई कहिलेकाहिँ हुने राजनीतिक बन्द जस्तै बुझेर बेलुकापख हुल बाँधेर चोकमा निस्कने गरेको देखिन्छ। दिउँसो सुनसान भएको बेला अत्यावश्यक सामग्री किनमेल गर्दा सुरक्षित भइने कुरा किन हामीले हेक्का राख्न सकेको छैनौं? त्यसैगरी सुरक्षामा खटेका प्रहरीको आँखा छलेर लखरलखर डुल्नुलाई उपलब्धि ठानेको जस्तो पनि देखिन्छ।
संकटको यो घडीमा भएका सीमित स्रोत साधनबाट काम चलाउनुपर्नेमा फजुल खर्च गरेर हामीमध्ये कैयौंले व्यापारीहरुलाई कालो बजारीका लागि प्रोत्साहन गरिरहेका छौं। कालोबजारी भएको छ कि भनेर चनाखो हुनुपर्ने बेलामा हामी उल्टो काममा लागिरहेका छौं।
सरकारी निकायलाई व्यवहारिक सुझाब दिन र सहयोग गर्न छाडेर एकोहोरो आलोचना गर्न त जसले पनि सक्छ। त्यसको साटो, आफ्नो शिक्षा, अनुभव र सीप भएको क्षेत्रमा योगदान गर्न सकिन्छ। जस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयका विभिन्न विभागले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका छन्। त्यसैगरी, अन्य शैक्षिक संस्थाहरुले एसइई र प्लस टु का विद्यार्थीलाई केन्द्रित गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरु सुरु गरेका छन्। यसको सिको अन्य क्षेत्रले पनि गर्नु जरुरी भइसकेको छ
सरकारले कानमा तेल हालेर बसोस् तर तपाईं हामी अनेक थरी काम गरौं भन्न खोजेको होइन। सरकारले पनि आफूले सक्दो गर्दै छ, जसमा हाम्रो सक्रिय सहयोग र साथ आवश्यक छ।
तपाईं चिकित्सक हो भने आफ्नो क्षेत्रको बारेमा लेख लेखेर अहिले समस्या भएकालाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै जना डाक्टरले आफ्नो नम्बर दिएर निशुल्क परामर्श दिइरहनुभएको छ। त्यसरी दिइएको नम्बरमा मैले केही दिन पहिले सम्पर्क गरेर घुंडा दुखेको समस्याबाट राहत पाएँ। जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ डाक्टर रवीन्द्र समीर र अर्का वैज्ञानिक डाक्टर समीरमणि दीक्षितले प्रमाणित र भरपर्दा सूचना र जानकारीहरु सामाजिक सन्जालमा प्रवाह गरिरहनुभएको छ।
निजी क्षेत्र त यस्तो अवस्थामा राज्यका दाहिने हात भएर अघि बढ्नुपर्ने हो। कारण, देशको धेरै सार्वजनिक क्षेत्र र पुँजी उनीहरुकै कब्जामा छ। दुःखको कुरा, राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने र सक्ने मध्येका एक जना व्यापारी केही दिनअघि कालोबजारी गर्दै रहेको अवस्थामा रंगेहात पक्राउ परे। नर्भिक अस्पतालका बसन्त चौधरीले केही मात्रामा भए पनि स्वास्थ्य सामग्री सरकारलाई सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसैगरी धनाढ्य विनोद चौधरी मार्फत पीपीई देशका विभिन्न भागमा पुगेका छन्।
तपाईं घरधनी हो भने आफ्नोमा बस्नेलाई उनीहरुको अवस्था हेरेर सहयोगको हात फैलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईंलाई थाहा छ, सहयोग त पालाको पैंचो हो, कतिबेला उनीहरुको सहयोग तपाईंलाई चाहिन सक्छ।
तपाईं अहिले सहरबाट आफ्नो क्षेत्रमा पुग्नु भएको छ भने आफूले जानेको कुरा त्यहाँ अरुलाई सामाजिक दुरी कायम गरेरै बाँड्न सक्नुहुन्छ। मानौं तपाईं विज्ञान विषयको शिक्षक हो र अहिले गाउँमा हुनुहुन्छ भने स्थानीय एफएमबाट बिहान बेलुका कक्षा सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं विदेश वा स्वदेश जहाँ रहे पनि अहिले आफ्नो ज्ञान र सीपलाई देश र जनताको लागि योगदान गर्ने ठूलो अवसर छ। जस्तै महावीर पुनले आविष्कार केन्द्रबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी अनेक सामग्री बनाएर निशुल्क वितरण गरिरहनु भएको छ। तपाईं अर्थशास्त्रको विद्यार्थी हो भने लकडाउनपछि देशमा पर्न जाने ठूलो आर्थिक समस्याबाट पार लगाउन सरकारले के गर्न सक्ला भनेर केही सुझाब सहितको लेख लेखेर योगदान गर्न सक्नुहुन्छ।
विदेशमा काम गरिरहेका लाखौं नेपालीहरु महामारीपछि रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किनुपर्ने हुनसक्छ। विदशी विश्वविद्यालयमा पढाउने नेपालीहरुले त्यसरी फर्किएका नेपालीहरुलाई के गर्न सकिन्छ भनेर स्थानीय निकाय र मुख्य मन्त्रीहरुलाई ठोस सुझाब दिन सक्नुहुन्छ।
संसदका कति जना सदस्य छन् तपाईंलाई थाहा होला। तर, एकजना गगन थापा मात्र सरकारलाई चिठी लेखेर र अनेक माध्यमबाट चिच्याएर सुझाब दिएका छन्, झकझक्याएका छन्। योगदान गर्न मन्त्री नै हुनुपर्छ भन्ने छ र?
संकटका बेला विभिन्न स्वार्थ समूहहरु चलमलाउन थाल्छन् अनि यही मौका पारेर सरकारी निकाय चुर्लुम्म भष्टाचारमा डुब्ने डर हुन्छ। यस्तोमा पनि हामी नागरिक चनाखो भएर सरकारी गतिविधि नियाल्नुपर्छ। हेर्नुस् त, स्वास्थ्य सामग्री किन्ने क्रममा ठूलै घोटालालाई मिडियाको खबरदारीले सरकारलाई पछि हट्न बाध्य बनायो।
हाम्रै छर छिमेकमा ज्याला मजदुरी गर्नेहरु खान नपाएर बसेको छन् भने खै सरकार कहाँ छ भन्दै तस्बिर हाल्नुभन्दा एक पोको चाउचाउ र एक बोटल पानी किनेर दिँदा जम्माजम्मी ४० रुपैयाँ खर्च हुन्छ। त्यसपछि उनलाई सम्बन्धित वडा कार्यालय वा प्रहरीसँग सम्पर्क गराउने काम उनको फोटो हालेर केही लाइक कमाउनेभन्दा हजार गुणा उपयुक्त होइन र? अहिले कतिपय वडा कार्यालयहरुमा राहत वितरण तथा खाना खुवाउने काम भइरहेको देख्न सकिन्छ। दिनभर मोबाइल समाएरै समय कटाउनुभन्दा त्यहाँ गएर बिहान बेलुका केही समय योगदान गर्न वा त्यो कार्यक्रममा आम्दानी खर्च वा पारदर्शीता के कसो छ यसो बुझ्न पनि त सकिन्छ।
तपाईंसँग सवारीसाधन छ भने प्रशासनबाट पास लिएर बिरामी, सुत्केरी वा कुनै अभर परेकोलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। धेरैले यस्तो काम गरिरहेका छन्। अहिले सामाजिक सन्जालमा फैलिएका झुट र कपोलकल्पित सूचना प्रवाहले पनि आम मानिसमा डर र त्रास फैलाएको छ, हामीले विज्ञका र प्रमाणित सूचना मात्र प्रवाह गर्दा पनि ठूलै काम गरेको ठहरिने अवस्था छ।
यी केही उदाहरण मात्र हुन्। यस्ता दर्जनौं क्षेत्र छन्, यसो हेर्दा झिनामसिना लाग्ला तर हामीले गर्ने सानो होस्टे वा हैंसेले हाम्रो समाज अनि सिंगो देशलाई नै दीर्घकालीन हिसाबमा ठूलो योगदान हुन सक्छ।
भनिन्छ नि, देशले आफैं कहिल्यै माग्दैन र आफैंले मनन गरेर दिनु पर्छ रे। हामीमध्ये कसैलाई यो सरकार, अहिलेको सत्तासीन पार्टी र यसका धेरै मान्छे मन नपर्लान्, उनीहरुसँग हाम्रो हजार मतभिन्नता होलान्, रिस होला, क्रोध होला, कतिपयको व्यक्तिगत कुण्ठा र मुद्दा होला, तर यो तुष पोख्ने र रिस साँध्ने बेला होइन। मान्छे रहे पो राजनीति, रिस राग र मारपिट गर्ने अवसर आउला। तर, मानव जाति नै संकटमा पर्ने अवस्था भएको बेला, सबै पूर्वाग्रह त्यागेर आफ्नो समाज र देशका लागि जे जति सकिन्छ, केही न केही गरौं। सरकार र पार्टीका लागि हैन, आफ्नै लागि, समाज, अनि देशका लागि र मानवताका लागि केही गरौं।